Processor-ka Apple Watch Series 7 wuu yaraan karaa wuuna ogolaan lahaa inuu batteriga kordhiyo | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan sii wadaynaa wararka xanta ah ee la xiriira Apple Watch Series 7, oo ah terminal, haddii aysan la kulmin dhibaatooyin soo saar, waxaa si wada jir ah loogu soo bandhigi doonaa iPhone 13 bisha Sebtember, dhacdo ay shirkadda ku saleysan Cupertino ay sidoo kale ku soo bandhigi karto Mac cusub jiilka labaad ee processor-ka M1.
Jiilkan cusub wuxuu soo bandhigi doonaa processor-ka cusub ee S7, oo ah processor-ka ay sheegato DigiTimes, waxay noqon laheyd laba geesle iyo wax yar, sidaas darteed Apple waxay isticmaali kartaa booska dheeriga ah si loo kordhiyo cabirka batteriga, mid ka mid ah meelaha daciifka ah ee Apple Watch waligiis.
Qalabkan cusub waxaa soo saari doonta Taiwan ASE Technology. Sida laga akhrisan karo degelkeeda, shirkadda waxay bixisaa tikniyoolajiyad wax soo saar laba-gees leh taas oo u oggolaanaysa yareynta processor-ka.
Sida maalmo ka hor ay sheegeen Mark Gurman iyo Debby Wu oo ka socda Bloomberg, Apple waxay tijaabisay yaree muraayadaha shaashadda iyo farsamo cusub oo dukumiintiyo saareysa oo shaashadda u soo dhoweyneysa daboolka hore. Haddii ugu dambeyntii Apple doorto qaabkan, Apple Watch cusub wuxuu soo bandhigi karaa naqshad leh geesaha fidsan.
Sidoo kale, sida laga soo xigtay Prosser dhawr maalmood ka hor, Apple Watch ayaa kari kara sii daa midab cusub, cagaaran (haddii aan tixgelinno in Prosser uu si dhib yar u helay saadaashiisa muddo dheer, waa inaan ku qaadanaa macluumaadkan ugu dambeeya iniin cusbo ah).
Naqshad cusub mooyee, xanta kaladuwan ayaa tilmaamaysa astaamo caafimaad oo horumarsan sida dareemidda heerkulka jidhka iyo la socodka sonkorta dhiigga, in kasta oo ta dambe ay u badan tahay inay qaadato dhawr sano in laga helo Apple Watch.
In kasta oo taariikhda soo bandhigida ee Apple Watch cusub ay soo dhowaatay, bilaha soo socda, waxaan hubaal ahaan doonaa a qayb wanaagsan oo ku saabsan xanta cusub, xatooyada iyo waxyaabo kale oo badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Processor-ka Apple Watch Series 7 wuu yaraan karaa wuuna ogolaan lahaa inuu batteriga kordhiyo